Universal အပြည့်အ ၀ ခေါက်နိုင်သောချိန်ညှိထားသော Tablet နှင့် Phone Stand များကိုအခမဲ့ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်ကင်းစွာဝယ်ယူပါ WoopShop®
အရောင် အဖြူ DIY ရပ် အနက်ရောင် DIY မတ်တပ်ရပ် Sliver မခေါက်နိုင်သော အနီရောင်မခေါက်နိုင်သော ရွှေမခေါက်ရ ပန်းရောင်မခေါက်နိုင်သော အနက်ရောင်ခေါက်။ မရ ပန်းရောင် Foldable White Foldable Foldable အစိမ်းရောင် အနက်ရောင် Foldable
တရုတ် / အဖြူရောင် DIY ရပ် တရုတ် / အနက်ရောင် DIY ရပ် China / Sliver ခေါက်။ မထား တရုတ် / အနီရောင်မခေါက်နိုင်သော တရုတ် / ရွှေမခေါက် တရုတ် / ပန်းရောင်မခေါက်နိုင်သော တရုတ် / အနက်ရောင်ခေါက်။ မရ China / Pink Foldable တရုတ် / အဖြူရောင်ခေါက်နိုင်သော တရုတ် / အစိမ်းရောင်ခေါက်နိုင်သော တရုတ် / အနက်ရောင်ခေါက်နိုင်သော
Universal အပြည့်အ ၀ ခေါက်နိုင်သောချိန်ညှိထားသောတက်ဘလက်နှင့်ဖုန်းနံရံ - တရုတ် / အဖြူရောင် DIY ရပ်များ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
နာမည်: Desktop Holder Tablet Stand
ထူးခြားချက်များ - အိတ်ဆောင်အရွယ်အစားထဲသို့အပြည့်အ ၀ ခေါက်ထားခြင်း၊ E-reader / တက်ဘလက်များ / iPad များ (၁၃ လက်မအထိ)၊ ထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်မှု၊ တည်ငြိမ်သည့်အစိုင်အခဲရပ်တည်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်စလစ်ဒီဇိုင်း၊ အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အချိန်နှင့်ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်း
သင့်လျော်သော - ၄ လက်မအရွယ် ၁၃ လက်မဖုန်းများအတွက်
မှတ်ချက်။ ။ သင်လိုချင်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရန် PLS မှရွေးစရာကိုစစ်ဆေးပါ။
Universal Compatibility ၃.၅-၁၂.၉.၉ လက်မဖုန်းများအတွက်သင့်တော်သည်
Adjustable Tablet Phone Stand - ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ထောင့်ကို ၀ မှ ၈၀ ဒီဂရီအထိညှိနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုချိန်ကိုဆန့်နိုင်သည်
မိုဘိုင်းဖုန်းတက်ဘလက် Desktop stand: Live Broadcast / TV ကြည့်ခြင်း / ဂိမ်းကစားခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Reserve Charging Cable Hole - သင့်ရဲ့အားသွင်းကြိုးကိုမထိခိုက်စေဘဲသင့်တော်တဲ့အမြင့်ကိုချိန်ညှိပါ။ အားသွင်းနေစဉ်ဖျော်ဖြေမှု။
Angle adjustable: လက်ဖြင့်ထောင့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူချိန်ညှိနိုင်သည့်အင်အားတစ်ခုနှင့်အတူရာဘာကူရှင် - မချော်ဘဲပစ္စည်းကိရိယာများကိုမထိခိုက်ပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်း / တက်ဘလက်အားလုံး - ၃.၅ လက်မမှ ၁၁ လက်မဖုန်း၊ တက်ဘလက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်
83 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ကောင်းကျိုးများ - ၁။ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ 1. ထုတ်ကုန်ကိုချောချောမွေ့မွေ့ကိုင်တွယ်ပြီးဖုန်းကိုမထိခိုက်ပါ။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုလူတိုင်းကိုအကြံပေးလိုပါတယ် ထုတ်ကုန်ကောင်း